HomeWararka CiyaarahaRasmi:Paris Saint-Germain oo Xaqiijisay in Kylian Mbappe uu Qandaraas cusub oo seddex sanno ah u saxiixayo
May 22, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in Kylian Mbappe uu heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa ilaa xagaaga 2025-ka.
Laacibka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa markii hore lagu waday inuu noqdo wakiil xor ah dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana si weyn loo filayey inuu si xor ah ugu biiro Real Madrid .
Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa diiday inay ka rajo dhigto qandaraaska u kordhinta Mbappe ee garoonka Parc des Princes, kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaana miiska u saartay weeraryahanka.
Horaantii Sabtidii, waxaa soo baxay warka ku saabsan heshiiska cusub ee Mbappe ee seddexda sano ee soo socda ee caasimadda Faransiiska, PSG ayaana haatan xaqiijisay in xiddigii hore ee Monaco uu heshiis cusub qalinka ku duugay.
Mbappe ayaa ka soo muuqday garoonka isaga iyo madaxweyne Nasser Al-Khelaifi ka hor kulanka sabtida ee Ligue 1 ee Metz oo kor u haya funaanadda 2025, 23 jirkaan ayaa ku faraxsan inuu kooxda ku sameeyo sixir.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhawaaqo inaan doortay inaan qandaraaska u kordhiyo Paris Saint-Germain, dabcan waan ku faraxsanahay,” Mbappe ayaa u sheegay website-ka rasmiga ah ee PSG .
“Waxaan ku qanacsanahay in halkan aan ku sii kori karo koox bixisa wax kasta oo lagama maarmaanka u ah si aan u soo bandhigo heerka ugu sarreeya, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan sii ciyaaro Faransiiska, waddankii aan ku dhashay, meeshii aan ku soo koray iyo meesha aan ku soo koray. Magacayga ayaan sameeyay.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Madaxweynaha, Nasser Al-Khelaïfi, kalsoonida, fahamkiisa iyo dulqaadkiisa, waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan taageerayaasha Paris Saint-Germain, labadaba Faransiiska iyo adduunka oo dhan, taageeradooda. , gaar ahaan bilihii dhawaa, si wadajir ah, dhinac iyo hammi, waxaan ku sameyn doonaa sixir gudaha Paris.”
Madaxweyne Al-Khelaifi ayaa hadalkiisa ku daray: “Ka go’anaanshaha Kylian ee PSG waxay u taagan tahay taariikh cajiib ah oo soo martay taariikhda Naadigeena, iyo waqti cajiib ah taageerayaasheenna adduunka oo dhan.
Tan iyo maalintii uu Kylian ku soo biiray qoyskeena, waxa uu ku guuleystey wax ka weyn sannadihiisi marxalad kasta, ka go’naanta PSG, wuxuu noqon doonaa aasaaska mustaqbalka naadigeena gudaha iyo dibaddaba.
Kahor bilaabashada fiidnimadii sabtida, Mbappe waxa uu dhaliyay 168 gool 87 caawin 216 kulan oo uu u saftay kooxda Mauricio Pochettino .